Ihowuliseyili COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette Corona Virus Rapid Test Kit abavelisi kunye nabathengisi | HEO
I-COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette Corona Virus Rapid Test Kit
1. [UKUSETYENZISWA KWENKONZO]
I-COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette yindawo ekuhamba kuyo i-immunoassay ejolise ekufumaneni i-anti-SARS-CoV-2 ye-nucleocapsid antigen kwi-nasopharyngeal swab kunye ne-oropharyngeal swab evela kubantu abarhanelwa nge-COVID-19 ngumboneleli wabo wezempilo.
2. [UKUGCINWA NOKUZINZA]
Gcina njengokupakishwe kwisingxobo esitywiniweyo kubushushu (4-30 ℃ okanye 40-86 ℉). Ikhithi izinzile ngaphakathi komhla wokuphelelwa iprintwe kwileyibhile.
Nje ukuba uvule isingxobo, uvavanyo kufuneka lusetyenziswe kwiyure enye. Ukuhlala ixesha elide kwindawo eshushu nenomswakama kuya kubangela ukonakala kwemveliso.
LOT kwaye umhla wokuphelelwa uprintiwe ekubhaliseni.
3. Ukuqokelelwa kwesampula
Isampulu yeNasopharyngeal Swab
Faka i-minitip swab nge-shaft eguqukayo (ucingo okanye iplastiki) ngokusebenzisa impumlo ehambelana nenkalakahla (hayi phezulu) de kube kufikelelwe kuxhathiso okanye umgama ulingana nalowo usuka endlebeni uye emathatheni omguli, obonisa ukudibana ne-nasopharynx. I-Swab kufuneka ifikelele kubunzulu obulinganayo nomgama ukusuka kwimpumlo ukuya ekuvuleni kwangaphandle kwendlebe. Gcoba ngobunono kwaye uqengqe iswabi. Shiya i-swab endaweni yemizuzwana eliqela yokufunxa imfihlo. Susa kancinci i-swab ngelixa uyijikeleza. Iimpawu zinokuqokelelwa kumacala omabini zisebenzisa i-swab efanayo, kodwa akukho mfuneko yokuqokelela iisampulu kumacala omabini ukuba i-minitip igcwele ulwelo oluvela kwingqokelela yokuqala. Ukuba i-septum ephambukileyo okanye ukuvaleka kudala ubunzima ekufumaneni isampuli kwinye impumlo, sebenzisa i-swab efanayo ukufumana isampuli kwenye impumlo.
Isampulu yeOropharyngeal Swab
Faka i-swab kwindawo yasemva komphimbo kunye neetoni. Hlikihla i-swab ngaphezulu kweentsika zeetoni kunye ne-oropharynx yangasemva kwaye uphephe ukuthinta ulwimi, amazinyo kunye neentsini.
Emva kokuba iisampulu zeSwab ziqokelelwe, i-swab inokugcinwa kwi-reagent ye-extraction ebonelelwe ngekhithi. Ingagcinwa ngokuntywilisela entlokweni ityhubhu enesisombululo sokulondolozwa kwentsholongwane esiyi-2 ukuya kwi-3 ml (okanye isisombululo se-isotonic saline, isisombululo senkcubeko, okanye i-phosphate buffer).
1.Skrolela isiciko sezinto ezenziweyo ezenziwe ngokutsha. Yongeza yonke i-reagent ye-specimen reagent kwityhubhu yokutsala, kwaye uyibeke kwisikhululo somsebenzi.
2.Faka isampulu ye-swab kwityhubhu yokutsala equkethe i-reagent yokutsala. Qengqa isawabi ubuncinci amaxesha ama-5 ngelixa ucofe intloko ubhekise ezantsi nakwicala lombhobho wokukhupha. Shiya i-swab kwityhubhu yokutsala umzuzu omnye.
3.Susa i-swab ngelixa ucofa amacala etyhubhu ukukhupha ulwelo kwi-swab. Isisombululo esikhutshiweyo siya kusetyenziswa njengomzekelo wovavanyo.
4.Faka i-dropper tip kwityhubhu yokutsala ngokuqinileyo.
1.Vumela isixhobo sovavanyo kunye neesampulu zokulinganisa kubushushu (15-30 ℃ okanye 59-86 ℉) ngaphambi kovavanyo.
2.Susa ikhasethi yovavanyo kwisingxobo esitywiniweyo.
3.Reverse ityhubhu yokufunxwa kwesampuli, ubambe ityhubhu yokutsala ethe tye, tshintshela amathontsi ama-3 (malunga ne-100μL) kwi-specimen well (S) yekhasethi yovavanyo, emva koko uqalise isibali-xesha. Jonga umzekeliso ongezantsi.
4.Lindela imigca enemibala ukuba ivele. Tolika iziphumo zovavanyo kwimizuzu eli-15. Musa ukufunda iziphumo emva kwemizuzu engama-20.
Efanelekileyo: * Imigca emibini iyavela. Umgca omnye wemibala kufuneka ubengummandla wolawulo (C), kwaye omnye umgca obonakalayo onombala okufuphi kufuneka ubengummandla wovavanyo (T). Kukulunga kubukho be-anti-anti-anti-anti-antigen ye-SARS-CoV-2. Iziphumo ezincomekayo zibonisa ubukho beantigens zentsholongwane kodwa ulungelelwaniso lweklinikhi nembali yesigulana kunye nolunye ulwazi oluchongiweyo luyimfuneko ukumisela imeko yosulelo Iziphumo eziqinisekileyo aziluthinteli usulelo lwebhaktiriya okanye usulelo oludibeneyo nezinye iintsholongwane. Iarhente efunyanisiweyo isenokungabi ngunobangela oqinisekileyo wesifo.
Okukubi: Umgca omnye wemibala uvela kwindawo yolawulo (C). Akukho mgca uvela kwindawo yovavanyo (T). Iziphumo ezingalunganga zikhukhumala. Iziphumo zovavanyo ezingalunganga aziluthinteli usulelo kwaye akufuneki zisetyenziswe njengesiseko sonyango okanye ezinye izigqibo zolawulo lwesigulana, kubandakanya izigqibo zolawulo losulelo, ngakumbi phambi kweempawu zeklinikhi kunye neempawu ezihambelana ne-COVID-19, okanye kwabo ukunxibelelana nentsholongwane. Kuyacetyiswa ukuba ezi ziphumo ziqinisekiswe yindlela yovavanyo lweemolekyuli, ukuba kukho imfuneko, kulawulo lwesigulana.
Akuyiyo: Umgca wolawulo uyasilela ukuvela. Umthamo weesampuli ongonelanga okanye ubuchwephesha benkqubo engachanekanga zezona zizathu zokuba usilele kumgca wokulawula. Ukuphonononga inkqubo kwaye uphinde uvavanyo usebenzisa ikhasethi yovavanyo entsha. Ukuba ingxaki iyaqhubeka, yeka ukusebenzisa iqashiso ngoko nangoko kwaye unxibelelane nomhambisi wakho wendawo.
Egqithileyo Uvavanyo lwe-China China Dengue Elisa-HCV Rapid Test Cassette / Strip / kit (WB / S / P)
Okulandelayo: I-COVID-19 IgG / IgM yeKhasethi eKhawulezayo yoVavanyo (igolide yeColloidal)
Uvavanyo lwe-COVID-19 Antigen Combo Rapid
Uvavanyo lwe-COVID-19 Antigen Rapid
I-COVID-19 Antigen ekhawulezayo yoVavanyo lweKhasethi
Umkhuhlane A + B Antigen Combo Rapid Test Cassette
Iikhasethi zoVavanyo lwe-Antigen ezikhawulezayo zovavanyo
I-COVID-19 Umkhuhlane A + B Uvavanyo lwe-Antigen Combo Rapid ...